ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အခုလောက်ဆို စီရော်နယ်လ်ဒိုကို လွမ်းနေလောက်ပါပြီ
Cristiano Ronaldo ကို လက်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရီးယဲလ် ခံစားနေရပြီလား
3 Oct 2018 . 6:01 PM
လိုပယ်တက်ဂီ Lopetegui ရဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အခုအချိန်မှာ စတင်ရုန်းကန်နေရပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက CSKA မော်စကိုနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး(၃)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့သလို အဲဒီ(၃)ပွဲစလုံးမှာလည်း ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ (၃)ပွဲဆက် ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တာဟာ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကစားခဲ့တဲ့ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း အဲဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
၂၀၀၆-၀၇ ရာသီနောက်ပိုင်းကတည်းက ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဖွင့် (၂)ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်း မရှိပေမယ့် အခုတော့ (၂)ပွဲကစား (၁)ပွဲရှုံးနိမ့်ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ် ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းက ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ၂၀၁၆၊ ဧပြီလ (၂၇)ရက်တုန်းက ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ မန်စီးတီးနဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ ပွဲမရှိခဲ့ဘဲ (၂၉)ပွဲအကြာမှာ ပထမဆုံး ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီအစမှာ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဘန်ဇီမာ Benzema ၊ ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale တို့ ခြေစွမ်းပြပြီး ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့လို့ စီရော်နယ်လ်ဒို မရှိလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ အသံတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဒီနှစ်ယောက်စလုံး ဂိုးပေါက်ပျောက်နေသလို ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ ခြေစွမ်းကလည်း သာမန်အဆင့်သာ ရှိပါတယ်။
ဆီဗီလာကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နာမည်ကို ဟစ်ကြွေးခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်အသင်းကစားသမားဘ၀ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံးရာသီက လွဲပြီး ကျန်တဲ့ရာသီမှာ တစ်ရာသီကို ဂိုး(၄၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုလို စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် ကစားသမားမျိုး မရှိတာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို လက်လွှတ်ခံခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရီးယဲလ် ခံစားနေရပြီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . .
Photo:Sports Illustrated,20 Minuten
Cristiano Ronaldo ကို လကျလှတျခဲ့တဲ့ အကြိုးဆကျကို ရီးယဲလျ ခံစားနရေပွီလား
လိုပယျတကျဂီ Lopetegui ရဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ အခုအခြိနျမှာ စတငျရုနျးကနျနရေပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂါနတေု့နျးက CSKA မျောစကိုနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံး(၃)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့သလို အဲဒီ(၃)ပှဲစလုံးမှာလညျး ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘူး။ (၃)ပှဲဆကျ ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တာဟာ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈခဲ့ပွီး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကစားခဲ့တဲ့ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး အဲဒီလိုမြိုး တဈခါမှ မဖွဈခဲ့ဘူး။
၂၀၀၆-၀၇ ရာသီနောကျပိုငျးကတညျးက ရီးယဲလျအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုအဖှငျ့ (၂)ပှဲမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ခွငျး မရှိပမေယျ့ အခုတော့ (၂)ပှဲကစား (၁)ပှဲရှုံးနိမျ့ပွီးပါပွီ။ နောကျထပျ ဆိုးရှားတဲ့မှတျတမျးက ရီးယဲလျအသငျးဟာ ၂၀၁၆၊ ဧပွီလ (၂၇)ရကျတုနျးက ခနျြပီယံလိဂျ ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ မနျစီးတီးနဲ့ ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ဂိုးမသှငျးနိုငျတဲ့ ပှဲမရှိခဲ့ဘဲ (၂၉)ပှဲအကွာမှာ ပထမဆုံး ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီအစမှာ တိုကျစဈကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဘနျဇီမာ Benzema ၊ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale တို့ ခွစှေမျးပွပွီး ဂိုးတှေ သှငျးယူခဲ့လို့ စီရျောနယျလျဒို မရှိလညျး ဘာမှမဖွဈပါဘူးဆိုတဲ အသံတှေ ထှကျခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ ဒီနှဈယောကျစလုံး ဂိုးပေါကျပြောကျနသေလို ကနျြတဲ့ကစားသမားတှရေဲ့ ခွစှေမျးကလညျး သာမနျအဆငျ့သာ ရှိပါတယျ။
ဆီဗီလာကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ရီးယဲလျပရိသတျတှဟော စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ နာမညျကို ဟဈကွှေးခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျအသငျးကစားသမားဘ၀ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး ပထမဆုံးရာသီက လှဲပွီး ကနျြတဲ့ရာသီမှာ တဈရာသီကို ဂိုး(၄၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ရီးယဲလျအသငျးမှာ စီရျောနယျလျဒိုလို စှမျးဆောငျနိုငျမယျ့ ကစားသမားမြိုး မရှိတာကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုကို လကျလှတျခံခဲ့တဲ့ အကြိုးဆကျကို ရီးယဲလျ ခံစားနရေပွီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . .